Waqtiga Akhriska: 8 daqiiqo(Last Updated On: 08/01/2021)
Baarkinka ugu weyn Jarmalka, Xadiiqadda mawduucyada 'Europa theme' ayaa leh in ka badan 100 soo jiidashada. Europa-Park waa baarkinka labaad ee ugu caansan Yurub, ka dib Disneyland ee Paris. Haddii carruurtaadu jecel yihiin gawaarida gawaarida, markaa qarax ayey ku lahaan doonaan korkiisa 13 gawaarida gawaarida ee jardiinada.
Waxaa intaa dheer, haddii aad runtii qorsheyneyso booqasho dheer, markaa waad joogi kartaa mid ka mid ah hoteelada goobta ku yaal. Sidan ayaad uga faa'iideysan kartaa booqashadaada Yurub-Park, oo la kulmaan dhammaan qaybaha mawduucyada ku jira: Laga soo bilaabo Adventureland ee Afrika ilaa Grimm’s Enchanted key.
Disneyland waa cadaalad 20 daqiiqado u jirta Paris. Waxaad toos uga heli kartaa garoonka diyaaradaha ee Paris, ama xarunta tareenka ee Marne-la-Vallee / Chessy.
Erayadu kuma filna in lagu sharxo sixirka Efteling theme park ee qoyska oo dhan, sidaa darteed waa inaad si fudud waqti ugu heshaa jardiinadan mawduucyada ah ee ku saabsan fasaxaaga Nederland.
Sidaa darteed, wax kasta oo rolayaal ah, doon, tareenka waxaa lagu farsameeyaa qaybo waaweyn oo lego ah. Jardiinadan xiisaha leh ee England ku taal waxay ku taal Berkshire oo nus-saac ayey kaliya uga jirtaa London.
Gudaha Asterix theme park waxaad ka heli kartaa Discobelix-ka weyn waxaadna yeelan kartaa wakhti aad u wareegaya, kula kulmaan hoonbarrooyinka iyo xayawaanada kale tuulada Gaulois, oo dabcan ku raaxeysiga soojiidashada kale ee xiisaha leh.
Fantasialand dhammaan carruurta 'riyooyinkoodu way rumoobeen 6 adduunyo qurux badan. Adduun walba, waxaad ku raaxeysan kartaa raacdooyinka ugu xiisaha badan, iyo indhaha iftiinka iyo midabka.
BestthemeparksEurope Qoyska OutdoorActivities themepark ThemeParks tareen safarka traintraveleurope